Interrailing Tips Fa Traveling Around Eoropa On A Budget | Save A Train
Home > Travel Europe > Interrailing Tips Fa Traveling Around Eoropa On A Budget
(Last Nohavaozina: 17/10/2020)
Interrailing soso-kevitra ary nandeha tamin'ny teti-bola azo atao raha manomana tsara ny dianareo. Cost ny fiaran-dalamby tapakila, zavatra ilaina, ny sakafo sy ny fialam-boly no mitovy eo amin'ny firenena any Eoropa, Fa misy fomba maro mba hankafy ny vidiny ambany dia ambany-diany. Soa ihany, miaraka amin'ny fiomanana, rail mandeha any Eoropa Tsy voatery lafo efa ho betsaka araka izay mety mieritreritra! Mba hanampiana anao manomana ny diany tonga lafatra manodidina Eoropa, no atambatra ny mora raisina hitarika ny interrailing torohevitra - Ahoana no interrail manodidina Eoropa eo amin'ny teti-bola.
Interrailing torohevitra No. 1 – Drafitra ny lalana, ary ampitahao amin'ny fiaran-dalamby saran
Ataovy azo antoka ny hanaovana drafitra ny Eoropeanina interrailing faritany haleha izy ary ny mampitaha ny vola lany amin'ny hafa fiaran-dalamby saran. Ny fitsitsiana vola dia ampahany lehibe amin'ny toro-làlanay Interrailing ary raha manao izany ianao dia tokony handeha ivelan'ny vanim-potoana avo. Travel tamin'ny andro mora indrindra amin'ny herinandro koa. Vonjeo ny tenanao Ho be ny vola sy ny andiam-niala foana mpandeha. Io dia hahafahanao mivezivezy amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny mahazatra mandritra ny fotoana tampony. Ampitahao ny vidiny amin'ny tranokalanay ary atombohy ny fandaminana sy ny vidiny ny anao fiaran-dalamby dia.
Afa-tsy amin'ny zavatra ilaina amin'ny alalan'ny fanaovana ny alina fiaran-dalamby
On misy Eoropeanina fitsangatsanganana amin'ny fitsangatsanganana an-dalamby, iray amin'ireo lehibe indrindra no lany zavatra ilaina. Ny safidy ny toerana mba natory ny alina be dia be dia miankina amin'ny teti-bola sy ny karazana traikefa no mitady. Night fiarandalamby safidy tsara ho an'ny tsy mandany vola amin'ny zavatra ilaina. Tsy misy sarany hafa mba handeha amin'ny alina fiaran-dalamby ary ho faran'izay betsaka ny fotoana ihany koa ny mandeha matory ianao raha mbola. Raha toa ianao ka mandeha avy any Milan ho Paris na Venice any Paris ny Thello Lamasinina dia ny fomba mahomby sy mampahazo aina hanatratra ny toerana halehany. Ny fitsangatsanganana amin'ny lamasinina amin'ny alina dia iray amin'ireo torohevitra lehibe mifamatotra satria fomba mahafinaritra hanitarana ny teti-bolanao izany mandritra ny diany!
Milan any Paris Lamasinina
Venice ho any Paris Lamasinina
Araraoty ny tanàna maimaim-poana manintona
Misy tanàna, dia afaka mitsidika isan-karazany tranombakoka sy manintona maimaim-poana. London manana miavaka isan-karazany ny tranombakoka sy manintona mba hitsidika, tanteraka maimaim-poana. Ao amin'ny tanàna eoropeanina, toy ny Copenhagen, Fidirana maimaim-poana ny tranombakoka dia natolotra indray mandeha isan-kerinandro. Berlin dia mampino ary manana afaka mandeha an-tongotra nitety ny tanàna rehetra ny tena manintona.
maro tanàna hafa tahaka an'i Amsterdam manaova alina isan-taona izay manokatra varavarana ho an'ny besinimaro maimaim-poana ny tranombakoka rehetra. Ny teti-bola dia tsy voatery ho lehibe mba hijery ireo tanàna tsy mampino. Ho azo antoka ny hitondra tombony mahafinaritra izany rehetra izany maimaim-poana attractions.
Amsterdam ho any Berlin Lamasinina
Mihinana izay misy ny mponina no – Torohevitra interrailing
Tanàna Eoropa dia mety ho lafo ny mihinana, indrindra rehefa ianao mafy amin'ny teti-bola. Miezaha mba tsy fisakafoana amin'ny trano fisakafoanana toerana ao amin'ny faritra mpizaha tany lehibe. Ary izao no toeram-pisakafoanana izay lafo vidy kokoa sy matetika ny kalitaon'ny sakafo dia latsaky ny toerana bebe kokoa avy. Miezaha handeha avy amin'ny faritra tena mpizaha tany, ka hano eo amin'ny an-toerana fa matsiro sakafo izay ny antsasaky ny vidiny.
Mieritreritra ny interrailing Eoropa? Ampiasao ny soso-kevitra sy Interrailing Go to Vonjeo Lamasinina-tserasera izay hijery manokana ny manjo rehetra sy ny manaraka manomboka mieritreritra traikefa nahafinaritra. Maro ireo discounted manjo misy manerana samihafa lalamby tambajotra Eoropeana. Hamarino tsara fa mitandrina ny fihenam-bidy farany amin'ny fanarahana ny anay Facebook ary amin'ny twitter pejy koa.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Finterrailing-tips%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / ru mba / de na / fanononana kokoa fiteny.